Hiran State - News: HS:- Degmada Maxaas oo lagala waregay Shabaab
HS:- Degmada Maxaas oo lagala waregay Shabaab
Hs:- Wararka caawa naga soo gaaraya degmada Maxaas oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Hiiraan ayaa waxaa caawa cabsi uga baxay kooxdii argagixisada aheyd ee mudada ku sugneyd halkaasi shacabkane dhibaatada ku hayey.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya iney u adkeysan waayeen dhibaato xaga nolosha ah oo soo food saartay kadib markii laga jaray wadadii ay sahayda u soo mari jirtay dhinacaas iyo magaalada Bulo Burde.
Dhinaca kale warar aan la hubin jiritaankooda ayaa sheegaya iney kooxdu ka baxeen tuulada Moqokori iyo tuulooyin ku xeeran oo ku yaala dhulka dulada loo yaqaano amaba caduunka oo ay siweyn isku abaabuleen dadka degaanka meelo badana ka xiray wadada iyagoo halkaas ku sugaya hanti badan oo ay Shabaab horey uga dhacday dadka reer miyiga ah iney hada jaaniskaan uga aarkutaan si ay wax uun ugala haraan mudada ay ka baxayaan degaanadaasi.
Meydad badan oo dhawantan laga helay saldhiga magaalada Belet Weyne ayaa la sheegaya iney ubadnaayeen dhalinyaro laga soo qafaalay dhulka fog ee miyiga ah iyadoona lagu dili jiray goobo qarsoodi ah oo ay kooxda Shabaab ka sameysteen magaalada Belet Weyne iyo degmada Buq Aqable.
La soco wararkeena danbe iyo xaalada Maxaas iyo Hiiraan.
· admin on January 14 2012 20:00:38 · 0 Comments · 3434 Reads ·
14,600,395 unique visits